Confhazi ihe PC dị n'ime maka nweta mpụga | Martech Zone
Hazi PC Esịtidem maka Nweta Mpụga
Monday, July 7, 2008 Fraịde, Jenụwarị 11, 2013 Douglas Karr
Site na nkuchi nke mgbidi na ndị na-eme njem, ijikọ na kọmputa ọzọ site na hasntanetị aghọwo ezigbo ihe ịma aka. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhazi kọmputa gị ka ịnweta mpụga ga-ekwe omume, enwere ụfọdụ mgbanwe nhazi miri emi ịkwesịrị ịme na netwọkụ gị.
Nweta Adreesị IP gị ma ọ bụ Adreesị DynDns
Nzọụkwụ mbụ ịchọta gị bụ ịnweta adreesị gị. N'ime ụwa Internetntanetị, a maara nke a dị ka Adreesị IP ma enwere ike ịdebe ya n'ụzọ dị mfe.
Chọpụta ma inwe adreesị IP (adịghị agbanwe agbanwe) ma ọ bụ adreesị IP dị omimi (na-agbanwe agbanwe). Ohere inweta bụ na ọ bụrụ na ị DSL ma ọ bụ ọbụlagodi DSL Pro na ị nwere adreesị IP dị ike. Ọ bụrụ n ’ịnọ na Azụmaahịa DSL ma ọ bụ Mọdem USB, ọ ga-abụrịrị na ị ga-agbanwe agbanwe.
Nke a bụ adreesị IP nke ekenyere gị n'ọnụ ụzọ gị na ntanetị gị. Y’oburu na ibuo n’onwe gi, o nweghi nsogbu. Ọ bụrụ na ị bụ Dynamic, debanye aha maka ọrụ dịka DNS di omimi. Kasị oge a routers nwere ikike ikwurịta okwu na DynDNS na-na adreesị IP gị emelitere. Mgbe ahụ, kama ịnye mmadụ adreesị IP gị, ị ga-enye ha ngalaba dịka findme.homeip.net.
Ọ bụrụ na ịmaghị adreesị IP gị, ị nwere ike iji saịtị dịka Kedu ihe bụ Adreesị IP m iji chọpụta.
Pinging gị DynDns ma ọ bụ adreesị IP na-ahụ ma ọ bụrụ na ị ga-esi a nzaghachi (Mepee "Iwu ozugbo" ma ọ bụ "Ọnụ" na-agba ọsọ: ping findme.homeip.net
Ọ bụrụ na ịnabataghị nzaghachi ọ bụla, ịnwere ike ịkwalite Pinging na nhazi rawụta gị. Rụtụ aka gị rawụta akwụkwọ.
Kwado PORT ebugharị gị rawụta
Ugbu a anyị nwere adres gị, ọ dị mkpa ịmata ihe site tinye nke gi home site na. A maara nke a dị ka PORT na kọmputa. Ngwa dị iche iche na-eji PORT dị iche iche, yabụ na ọ dị mkpa na anyị nwere PORT kwesịrị ekwesị meghere ma chụọ na kọmputa gị. Site na ndabara, ihe ka ọtụtụ n'ime ndị na-akwọ ụgbọ mmiri na-emechi ọdụ ụgbọ mmiri niile ka onye ọ bụla ghara ịbanye na netwọk gị.
Iji nweta isi iyi PC iji kpọtụrụ PC na-aga, rawụta gị kwesịrị iduzi okporo ụzọ gị na PC gị.
Anyị kwuru maka mkpa IP Adreesị IP dị maka netwọkụ gị, ugbu a ọ dị mkpa na ị nwere Adreesị IP Static maka PC gị na Netwọk Esịtidem gị. Rụtụ aka na gị rawụta akwụkwọ na-esi hazi a static IP Address maka gị Esịtidem PC.
Dabere na ụdị ngwa ịchọrọ ijikọ, ị ga - enyere aka PORT na - ebugharị site na Router gị gaa na adreesị IP nke PC gị.
Http - ọ bụrụ n’ịchọrọ ịgba ọsọ sava weebụ na PC gị wee mee ka ọ nwee ike ịnweta ya na mpụga, PORT 80 ga-ebufe ya.
PCAnywhere - 5631 na 5632 ga-ebufe.
VNC - 5900 ga - adị mkpa ibugharị (ma ọ bụ ọ bụrụ na hazie ọdụ ụgbọ mmiri dị iche, jiri nke ahụ).
Kwado Ntọala Firewall na PC gị
Otu PORTS ahụ ibugoro na PC gị ga-achọ ka enyere gị aka na sọftụwia Firewall nke PC gị. Rụtụ aka na firewall gị na otu esi enyere ngwa ahụ na / ma ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri ịchọrọ ka ị nweta ya na mpụga.
Ime mgbanwe nhazi ndị a adịghị mfe, mana ozugbo ọ niile na-arụ ọrụ ọfụma, ị ga-enwe ike ịnweta PC gị site na ngwa nke ịhọrọ site na ebe ọ bụla ịchọrọ.
IHE: N'agbanyeghị ihe omume ọ bụla ị na-tinye n'ọrụ, jide n'aka na itinye a siri ike na aha njirimara na paswọọdụ! Ndị na-agba ọsọ na-achọ ịpịa netwọk na ịchọ ọdụ ụgbọ mmiri na-emeghe iji hụ ma ha nwere ike ịnweta na / ma ọ bụ nyefee PC ndị ahụ. Ọzọkwa, ị nwekwara ike igbochi adreesị IP nke ị ga-enye ohere.
Ngalaba Gbanwere Marketingtechblog.com
Kọmịshọna Smoosier Southside